नयाँ वर्षको पार्टी : रक्सीको ‘ह्याङ्गओभर’ हुनसक्छ खतरनाक, कम गर्न अपनाउनुस् यस्ता उपाय – Health Post Nepal
नयाँ वर्षको पार्टी : रक्सीको ‘ह्याङ्गओभर’ हुनसक्छ खतरनाक, कम गर्न अपनाउनुस् यस्ता उपाय
२०७८ पुष १७ गते १३:०६
नयाँ वर्ष २०२२ सुरु भइसकेको छ। कोरोना संक्रमणको डरका बीच थुप्रै ठाउँमा जमघट तथा पार्टीहरु आयोजना गरिएका छन्। नयाँ वर्ष मनाउने क्रममा अक्सर मानिसले अत्यधिक मदिरा र अन्य मादक पदार्थ सेवन गर्ने गरेका छन्। जुन स्वास्थ्यका लागि निकै हानिकारक हुने चिकित्सकहरुको भनाइ छ। यसतर्फ विशेष ध्यान दिन जरुरी छ।
मदिरा र अन्य लागूपदार्थको सेवनले स्वास्थ्यमा दीर्घकालीन ‘साइड इफेक्ट’ हुन सक्छ। यदि तपाईं पार्टीमा रक्सी सेवन गर्नुहुन्छ भने, निश्चित रूपमा यसको मात्रालाई ध्यानमा राख्नुहोस्। धेरै रक्सी पिउनाले ‘ह्याङ्गओभर’ हुन सक्छ। धेरै अवस्थामा, यसले स्वास्थ्यको लागि गम्भीर जटिलताहरू पनि निम्त्याउन सक्छ।
वरिष्ठ स्वास्थ्य विज्ञ डा. अनुपम वत्सलले भन्छन्, ‘मदिरा संयमित मात्रामा पिउने हो भने पनि यसको सेवन स्वास्थ्यका लागि निकै हानिकारक मानिन्छ। अल्कोहलमा पाइने सामग्रीले कलेजोजस्ता अंगहरूमा गम्भीर क्षति पुर्‍याउन सक्छ। यस्तो अवस्थामा नयाँ वर्ष मनाउन स्वास्थ्यप्रति कुनै किसिमको लापरवाही हुनुहुँदैन। सबै कुरा थाहा हुँदाहुँदै पनि मानिसहरू चाडपर्वमा स्वास्थ्यको ख्याल गर्न बिर्सन्छन्। मदिराको अत्याधिक सेवनले हुने ‘ह्याङ्गओभर’ धेरै अवस्थामा गम्भीर हुन सक्छ। त्यसैले समयमै यसको लक्षण पहिचान गरी उपचारका लागि उपायहरू अपनाउनु आवश्यक छ।’
‘ह्याङ्गओभर’ भएको कसरी थाहा पाउने?
डा. अनुपम रक्सीको मात्राले ‘ह्याङओभर’ निम्त्याउँछ बताउँछन्। अवस्था भने व्यक्तिपिच्छे फरकफरक हुनसक्ने उनले बताए। ‘ह्याङ्गओभरका कारण मानिसमा कडा टाउको दुख्ने, घाँटी सुख्खा हुने, वाकवाकी लाग्ने र बेहोस हुने जस्ता समस्या हुन सक्छन्। खाली पेटमा रक्सी पिउनु हुँदैन, किनकि यसले गम्भीर स्वास्थ्य समस्याहरूको जोखिम बढाउँछ। साथै, पहिले नै मधुमेह जस्ता समस्याबाट ग्रसित व्यक्तिहरूमा ह्याङ्गओभरको गम्भीर लक्षणहरू हुनसक्छन्, यसले तपाईंको रगतमा सुगरको स्तरलाई धेरै कम गर्न सक्छ, जुन गम्भीर स्वास्थ्य अवस्था मानिन्छ।’, उनले भने।
‘ह्याङ्गओभर’बाट कसरी रहने टाढा?
‘ह्याङ्गओभर’का लक्षणहरूबाट बच्न अत्यधिक मदिरा सेवनबाट टाढा रहनुहोस्। ह्याङ्गओभरका कारण शरीरमा डिहाइड्रेसनको समस्या हुन सक्छ, यसबाट बच्न पानी र तरल पदार्थको अधिकतम सेवन गर्नुपर्छ। शरीरबाट विषाक्त पदार्थ बाहिर निकाल्न र शरीरलाई हाइड्रेट गर्न पानी पिउनु राम्रो मानिन्छ। तपाईं जुस, नरिवल पानी र सूप पनि पिउन सक्नुहुन्छ। यस बाहेक शरीरलाई पूर्ण आराम दिनुहोस्, राम्रो निद्रा लिनुहोस्, यसले पनि लक्षणहरू कम गर्न मद्दत गर्दछ।
यी उपाय अपनाउनुस्
केरा खानुस् – केरा पोटासियमको राम्रो स्रोत हो र यसले शरीरको इलेक्ट्रोलाइट्सलाई राम्रो बनाउन मद्दत गर्छ। कम इलेक्ट्रोलाइट लेभलले थकान, टाउको दुख्ने, वाकवाकी लाग्ने, मांसपेशीमा दुखाइ र ऊर्जाको कमी हुने हुन्छ। यसकारण केरा खानु तपाईंको लागि फाइदाजनक मानिन्छ।
कार्बोहाइड्रेटको सेवन – ‘ह्याङ्गओभर’ कम गर्न पनि कार्बोहाइड्रेटको सेवन लाभदायक मानिन्छ। यसले तपाईंको ब्लड सुगरको स्तर बढाउन मद्दत गर्दछ, जसले सामान्यत: थकान र कमजोरी जस्ता लक्षणहरू कम गर्न मद्दत गर्दछ।
कफी पिउनुहोस् – अध्ययनले देखाएको छ कि, कफी वा चिया पिउनु पनि ‘ह्याङ्गओभर’ कम गर्न लाभदायक हुनसक्छ। ह्याङ्गओभरको कारणले हुने थकान र टाउको दुखाइ कम गर्न यसले फाइदा पुर्‍याउन सक्छ। यद्यपि, ध्यान राख्नुहोस् कि क्याफिनयुक्त पेयहरू मूत्रवर्धक हुन्, त्यसैले अत्यधिक खपतले तपाईंलाई थप निर्जलीकरण गर्न सक्छ।
कागती-पानी पिउनुहोस् – ‘ह्याङओभर’ कम गर्न पनि कागती-पानी पिउनु लाभदायक मानिन्छ। यसले रक्सीको नशा कम गर्न सक्छ। यसबाहेक साइट्रिक फलफूलको सेवन पनि फाइदाजनक हुन्छ।